Fanafihana fiarabe mpividy vokatra Lasan’ireo jiolahy ny vola 7 tapitrisa ariary
Vola 7.000.000 Ariary sy fitafiana ary kara-panondro sy ny taratasim-panomezana alalana hanangom-bokatry ny tompona fiara no lasan’ireo dahalo. Mety efa tsikaritr’ireo jiolahy ny fitondran’ilay fiara ny vola be izay entina hividianana entana.
Araka ny fampitam-baovaon’ny zandary eo Ankadilalana, notafihina jiolahy efatra nitondra basy sy zava-maranitra ny kamiô iray mpitatitra entana mampitohy an’Imerintsiatosika izay fiavian’ny tompon’ilay fiarakodia ho any Soafiadanana. Teo Ankoririka, fokontany Ambatomirahavavy Toby, kaominina ambanivohitra Miandrarivo, Tsiroanomandidy no niandrasan’ireo jiolahy kendritohina ity fiarabe ity izay vao handeha hividy voamaina. Ilay tompona fiara sady mpandraharaha amin’ny fanangonana vokatra any an-toerana sy ny mpamily ary mpandeha efatra no tao anaty fiara. Noho ny hery tsy nitovy, nilefitra ireo voatafika. Efa nitifitra mantsy ireo jiolahy ka vaky ny fitaratra anoloana sy ny fampangatsiahana motera amin’ny rano (radiateur) an’ilay fiara. Tsy nisy ny naratra sy ny aina nafoy. Zandary telo avy ao Ambohidrangory sy ny fokonolona any an-toerana no nanatanteraka ny fanarahan-dia. Efa nomena toromarika amin’ny fisavana sy fisamborana ireo jiolahy ireo ihany koa ny mpitandro filaminana manodidina.